UJimmy Iovine: "inguqulo yokuqala ye-Apple Music yayifisa kakhulu" | Ngivela kwa-mac
UJimmy Iovine: "inguqulo yokuqala ye-Apple Music yayifisa kakhulu"
Abaphathi be-Apple Music uJimmy Iovine noBozoma Saint John baklonyelise i- ingxoxo ku-BuzzFeed News lapho bekhuluma khona ngomklamo omusha wensiza yomculo yokusakaza yakwa-Apple. Lezo zitatimende ziveza nokuthi bacabangani ngezinye zezinto ezintsha futhi baphendule ekugxekweni ngezingoma zomculo.
Ngemuva nje kokukhishwa okukhethekile kwe-albhamu yakamuva kaFrank Ocean ethi "Blonde," i-Universal Music Group ivimbele ukukhishwa okukhethekile kumasevisi okusakaza umculo. U-Iovine utshele iBuzzFeed News ukuthi I-Apple ayinazo izinhlelo zokuba ilebula lomculo, kepha akazi nganoma iyiphi enye indlela i-Apple Music engasiza ngayo ukukhiqiza nokusabalalisa umculo omnandi.
1 I-Apple Music, okhethekile nezinsizakalo zamahhala
1.1 Iovine ihlasela ukubhaliswa kwamahhala
2 Ekwakhiweni kabusha kwe-Apple Music
2.1 Izinhla zokudlalayo ngokwezifiso
I-Apple Music, okhethekile nezinsizakalo zamahhala
"Kuningi esikubeke kulokhu, sibe nempumelelo yangempela, futhi sihlala sihlala lapho sikhona ebudlelwaneni," kusho u-Iovine, egcizelela ukuthi akazimisele ngokuhlasela indawo yerekhodi. "Siyahamba, futhi sibona ukuthi yini okusebenzayo… Njalo lapho senza [okukhethekile], sifunda okusha." Ubuye wengeza ngokuthi i-Apple Music izothuthukisa ukuthungathwa kwayo kokunye nabanye abalingani, abanjengoSony Music Entertainment neWarner Music Group, wathi, “Yi-Apple show leyo. Uma nje i-Apple ingicela ukuthi ngenze engikwenzayo, ngizoqhubeka nokukwenza. "
Iovine ihlasela ukubhaliswa kwamahhala
U-Iovine uqhubeke wathi akazi ukuthi ukuhlukaniswa kwemakethe yezomculo, ngezinsizakalo ezihlukile ezinikeza okhethekile okuhlukile, kungalimaza noma kusize imboni yezomculo, kodwa uyazi. ikholelwa ukuthi izinsizakalo ezinikeza izinketho zokulalela mahhala ziyingozi.
"Abanamalungelo, noma ngabe bangobani, kumele benze okuthile, ngoba kuningi [umculo] wamahhala laphaya, futhi kuyinkinga," utshele iBuzzFeed News. U-Iovine uthi kunomculo wamahhala owanele emhlabeni abantu abazibuza ukuthi kufanele yini babhalisele insizakalo.
Ekwakhiweni kabusha kwe-Apple Music
Mayelana nedizayini entsha ye-Apple Music, umbhalo omkhulu nesakhiwo esenziwe lula kakhulu kuhloswe kubasebenzisi abangenalo ulwazi lwangaphambilini ngezinsizakalo zokusakaza, kufaka phakathi abadala nezethameli zomhlaba, ngokusho kweBuzzFeed News. Olunye ushintsho, njengokuhambisa ithebhu ethi "Ilabhulali Yami" ekhasini langaphambili nendawo endaweni yethebhu engezansi kwesobunxele, kuhloswe ngalo ukwenza izinto zibe lula.
IBozoma Saint John yasho lokho omunye wemibuzo ophakanyiswe yi-Apple ngesikhathi sesigaba sokuhlela kabusha ukuthi abantu bahlangana kanjani nomculo wabo phakathi nosuku olujwayelekile. Inkampani yeCupertino izamile ukuthola ukuthi yini abasebenzisi ababeyifuna ngaphakathi kwe-Apple Music nokuthi inkampani ingakusiza kanjani lokho.
Izinhla zokudlalayo ngokwezifiso
Lokho kufaka uhlu lwadlalwayo olususelwa ku-algorithm lwe-Apple Music. I-Apple isebenzisa idatha yomculo we-iTunes, izintandokazi, ne-play count ukuthola ukuthi izodlala ini ohlwini olusha lwe- “My New Music Mix” ne- “My Favorites Mix”.
Imodeli yesikrini egobile ye-Apple
Uhlu lwami lwezintandokazi lunikeza ukusondelana okuseduze ngomculo owuthandayo nelalelwa kakhulu ngumsebenzisi, ngenkathi uhlu lwami lweMy New Music lunikeza izingoma ezisanda kufakwa, ezimakwe ngabahleli be-Apple Music, ngokuya ngephrofayili yomsebenzisi. Igama lomsebenzisi. Uhlu lokudlalwayo olwenzelwe wena ngokwengeziwe luzoza ku-Apple Music kepha kuphela ngemuva kokuthi inkampani ibahlolisise kahle yathola ukuthi bangaletha yonke imiphumela.
Okokugcina, u-Iovine ukusho lokho inguqulo yokuqala ye-Apple Music yayifisa kakhulu, nokuthi inkampani "mhlawumbe" ifake kakhulu kuyo ngokushesha kakhulu. Uthe i-Apple ibonakalisile, futhi manje iqhubekisela phambili izinto ngesivinini esikhululekile. U-Iovine naye ukuvezile lokho izindaba zizofika ku-Apple Music ukuthi akekho umuntu «obonayo eza».
Ucabanga ukuthi yini abangayilungiselela kusuka kuCupertino ngekusasa le-Apple Music?
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » UJimmy Iovine: "inguqulo yokuqala ye-Apple Music yayifisa kakhulu"
Izici ze-Apple Maps ezakhelwe ku-Safari ye-mac